Booqashada dhagaxa madaw – Kaasho Maanka
Dadka aaminsan diinta islaamka waxa ku waajiba inay sannadkii hal mar boqdaan magaalada Makka gaar ahaan kuwooda dhaqaalaha haysta ee awooda inay soo gutaan waajibkaas diiniga ah.
Makka waxay ahayd xarun ganacsi, taariikhda marka dib loo eego ganacsatadu waxay hanti fara badan ka dheefi jireen marka ay qabaa’ilka carabtu soo booqdaan dhagxaanta ay caabudi jireen reer Makka, booqashadan iyo dhammaan duquusta xajkuna maaha wax la bilaabmay Islaamka ee waqtiyadaas horena way jirteen.
Muslimiintu maanta waxay dhaqaale badan ku bixiyaan inay soo arkaan Kacbada oo ah dhagax yaal Makka kuna soo wareegaan, laba buurood dhexdoodna ay marba dhan u cararaan. Dhagax madawna ay dhunkadaan, wax aan la arkayn oo ay shaydaan ku tilmaameenna ay shiidaan. Dadku markay ka tanaasulaan garashada waxay lahaystayaal u noqdaan tuugo ka iibisa been iyo rajo.
Illaaha Maxamed wuxuu leeyahay (ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻤَﺸْﺮِﻕُ ﻭَﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏُ ﻓَﺄَﻳْﻨَﻤَﺎ ﺗُﻮَﻟُّﻮﺍ ﻓَﺜَﻢَّ ﻭَﺟْﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺍﺳِﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ) “Bari iyo galbeed Illaahay baa iska leh meelkastaad wejiga u jeedisan ama u tukataan wejiga Illaahay waad ka heleysaan”. Taas oo ka dhigan in Illaahay kawnkan isagu leeyahay, meel kasta oo kamidana joogo. Hadii Illaahay sidaa yidhi maxaa qasbay in kumanaan doolar lagu bixiyo booqashada goob gaar ah sida Makka?
Dadka muslimiinta ahi waxay aaminsan yihiin haddii ay Makka booqdaan in denbigooda la dhaafayo. Waxa iswaydiin mudan maxaa isku xidhay denbi dhaafka Illaahay iyo booqashada Makka? Dhulka kale ilaah ma joogo miyaa mise waa nijaas? Kabcadu waa dhagax wax ay qiime la taaban karo o ay leedahayna ma jiro, wax denbi lagu dhaafana kafog balse waa meel ay dadka ku dhacaan carabtii diintan la timi. Haddii ay dhihi lahaayeen bilaash weeye Xajku maadaama uu cibaado yahay waxbay ahaan lahayd laakiin waxa wax lala yaabo ah in cibaado laga macaasho. Xajku haduu salaadda la mid yahay ma xaq baa in lacag laga qaado qofka gudaneya?
Waxyaabaha yaabka leh ee meeshaa ka dhaca waxaa ka mid ah u tartanka dhunkashada iyo taabashada dhagax madaw (الحجر الاسود) dhagaxaas sida ay aaminsanyihiin muslimiintu waxa laga keenay Jannada. Waxaa laga weriyey Ibnu Cabbaas inuu yidhi: nebigu wuxuu yidhi wuxuu kasoo degey dhagaxa madoobi Jannada isagoo caanaha ka cad waxaana madoobeeyey xad gudubka dadka.
عن ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ” ﻧﺰﻝ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﺑﻴﺎﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﻓﺴﻮﺩﺗﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ” . ﺭﻭﺍﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ” ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻟﻴﺒﻌﺜﻨﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎﻥ ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻬﻤﺎ، ﻭﻟﺴﺎﻥ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ، ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﻪ ﺑﺤﻖ .” ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ.
Sida ku cad xadiiskan Maxamed wuxuu ku dhaartay dhagaxaasi inuu qiyaamaha naf yeelan doono hadal iyo aragna yeelan doono welibana uu makharaatiga u furi kii si dhab ah u dhunkaday ama u taabtay.
Dhagax nooca Tektite
اﻥ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺤﻄﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﺣﻄﺎً .” ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺻﺤﺤﻪ
ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ.
Xadiiskan waxaa isna ku cad taabashada ama dhunkashasa dhagaxaas in ay kaa masaxayso denbi oo dhan.
Dhagax la taabtay ama la dhunkaday ayaa denbi dhaaf lagu heleyaa balse kuwa dhagxaanta caabuda ee aaminsan inay danbigooda dhaafayaan waa lagu qosleyaa nacasnimadooda, ma garan labadan qolo midka nacaska ah.
Dhagaxaa madoobi kama duwana dhagxaanta kasoo daata cirka (نيازك) waa laga yaaba inay adduunka ku yar yihiin ama Carabtii saxaaraha deganayd ay la ahayd wax lala yaabo, kan Kabcada yaal cilmi ahaan waxa magaciisa caadiga ah loo yaqaan (Tektites) mana jirto denbi uu la madoobaadey iyo Janno laga keenay ee waa dhagax midabkiisu noocan yahay.
Xajka marka la gudaneyo waxaa la dhagxiya meel loogu talo galay, dad ayaana ku dhinta sannad walba iyagoo tartan ugu jira siday u dhagxin lahaayeen shaydaan ay aaminsanyihiin inuu meesha ku xidhan yahay. Ma jiro shaydaan meesha ku xidhan oo sugeya sannad walba in la dhagxiyo blase waxaa la sheegaa nebi Ibraahim markuu ku riyooday isagoo wiilkiisa Ismaaciil gawracaya ee uu subaxii u qalab qaatay inuu wiilkiisa yar gawraco ayaa waxaa ka hor istaagey gawracaas Ibliis oo Ibraahim shiid ku bilaabay, maalintaas ayayna waajibtey in dhagaxa la tuuro. Hadiiba ay sheeko xariirtaasi run tahay kee saxan Ilaaha rabay in ilmo yar oo aan waxba galabsan la gawraco iyo ibliiska arrintaa kahor yimid ee isku dayay inuu ka bad-baadiyo ilmaha midida?
Diintu waxay si guud ugu adeegtaa danaha Carabta. Xajka danta laga lahaa welina laga leeyahay waxay ahayd mid dhaqaale. Dawladda maanta maamusha Xajka waxay dhistay Huteelo lagu dego, tareeno la raaco, biyo iyo timir barakaysan waxaasoo dhanna dadka waxaa lagaga qaadaa lacag adag iyadoo la leeyahay kusoo dhowaada gurigii Illaahay. Dadkaas waxaa loogu yeedha magaca martidii Illaahay waana lagu soo baadhaa meesha. Haddii Illaahay marti loo yahay gurigiisina la joogo saw ma haboonayn in ilaahu dadka soo booqday marti qaaday halka uu furanayo?
Xajku waa dalxiis ee maaha cibaado, waana meel dadka lagu baadho kadibna lacagta kasoo gasha ayaa dadka muslimiinta ee kale lagu laayaa ama dhasha boqortooyadaa ku
Ma taqaanaa saxaabiga quraanku rabitaankiisa ku soo dagi jiray?
Islaamka oo ah diinta labaad ee ugu dadka badan diimaha maanta ka jira adduunka waxa bilowgeeda, dhismeheeda iyo fidinteedaba iska kaashaday dad badan inkasta oo magacu raacay Maxamed oo ahaa aasaasaha diintan. Ka qayb qaadashadaasi waxay ahayd mid noocya badan oo leh naf, maal, muruq iyo maskaxba.Ninka aynu kaga hadlayno qoraalkani waa saxaabi kaalin mug wayn ka qaatay dhismaha iyo fidinta...
W/Q: Khaled Hassan 26th January 2019